Safarkaygii Islaamka: Heesaaga caanka ah ee Yusuf Islam | Somaliska
Waa markale iyo khisooyinkii xiisaha badnaa ee ku saabsan Muslimiinta cusub ee diinta Islaamka qaatay. Ninka lagu magacaabo Cat Stevens waxaa uu ahaa heesaa caan ah oo lacag iyo aduunka ilaahay siiyay balse fahmay qiimaha aduunyada. Hadaba isaga ayaa nooga waramaya wadadii uu u soo maray Islaamka.
Halkaan hadal cusub idinkugu sheegi maayo balse waxaan idin sheegayaa wixii aad horey u ogeydeen ee ah fariintii nabi Maxamed (nnkh) iyo xaqiiqada diinta Islaamka. Bani’aadamka ilaahay waxa uu siiyay caqli ay ku gartaan xaqiiqada oo ilaahay waa na karaameeyay. Ilaahay waxa uu dadka u abuuray in ay dhulka masuul ka noqdaan, qofkii aan garan midaas oo aan iska saarin kibirka iyo isla weynida waa uu qasaaray.
Waxaan ku soo barbaaray nolol raaxo ku dheehantahay. Waxaan ku dhex jiray heesaha iyo bandhigyada. Reerka aan ka dhashay waxay ahaayeen Kiristaan, sidaas ayaan ku qaatay diinta Kiristanka. Markasta waan aaminsanaa jiritaanka Alle balse xiriir toos ah lama lahayn, waxaa nala baray in aan ilaahay u marno Ciise. Inkastoo aan aqbalay sheekadaas marnaba si fiican iigama aysan dhaadhicin.
Markii aan eegay sawirada ay ka sameeyeen Ciise, waxay ahaayeen dhagaxyo aan nolol ku jirin. Waxaa kale oo iga sii cajabiyay markii ay yiraahdeen ilaahay waa sadex.
Heesaa caan ah
Si tartiib tartiib ah ayaan bilaabay in aan uga fogaato diinta Kiristaanka. Waxaan bilaabay in aan heesaha sameeyo oo waxaan doonayay in aan noqdo heesaa caan ah. Waxaan go’aansaday in aan ku daydo waxyaabaha aan ka daawaday filimaanto, ujeedkayga ugu wayn waxa uu ahaa in aan lacag badan tabco. Lacagta ayaa noqotay waxa aan caabudo.
Noloshaas ayaa ii noqotay hogaan, dadka caanka ah ayaan jeclaaday. Balse hoos waxaan ka dareemayay bani’aadanimada. Waxaan doonayay haddii aan taajir noqdo in aan caawiyo masaakiinta. Quraanka ayaa noo sheegay in aan balan qaad sameyno balse markii ay wax badan na soo galaan aan baqiil noqono.
Waxaa dhacday in aan caan noqday, aad iyo aad ayaan caan u noqday. Warbaahinta oo dhan ayaa warkeyga haysay, nolosha ayaan ka weynaaday. Markaas ayaan bilaabay in aan isticmaalo qamri iyo daroogo.
Markii aan hospitaalka galay
ka dib sanado aan raaxaysi ku jiray iyo nolosha sareysa ayaa waxaa dhacday in aan xanuunsado. Hospitaal ayaan galay oo waxaa igu dhacday tiibisho. Markaas ayaan bilaabay fikir, waxaan is weydiiyay war ma jir kaliya ayaan ahay? ujeedkeygu ma in aan jirkeyga qanciyaa? Xanuunka waxa uu ahaa furaha in aan ilaahay ka fikiro. Su’aalo badan ka dib ayaan bilaabay in aan jawaabo raadiyo,.
Xiligaas waxaa caan ahaa diimaha bariga aasiya. Waxaan bilaabay in aan wax badan akhriyo waxaan bilaabay in aan isticmaalo daawo dhaqameed iyo in aan hilibka iska dhowro, waxaan bilaabay in aan aamino waxyaabaha ay dhigayaan diimahaas balse marnaba ma aaminin in aan ahay jir keliya.
Maalin maalmaha ka mid ah aniga oo lugeynaya ayaa waxaa soo dhacay roob..waxaan bilaabay in aan ka hargalo roobka..waan istaagay oo waxaan isweydiiyay “jirkeygu waxa uu dareemayaa qoyaan. Waxaan dareemay in naftu ay amrayso jirka, oo jirku uu yahay dameer la amrayo.
ka dibna waxaan xaqiiqsaday in aan leeyahay doorasho. Waxaan xaqiiqsaday rabitaanka ilaahay iyo in aan sameyn karo doorasho. Waxaan la dhacay waxyaabaha aan ka bartay diimaha cusub ee aan akhrinayay. Xiligaas Kiristaanka waa nacay. Waxaan dib u bilaabay in aan sameeyo heesaha oo xiligaan waxaan ku heesayay heeso ku saleysan dareenka ilaahay iyo qiimaha nolosha. Waxaan xaqiiqsaday in aan ku socdo wado toosan.
Xiligaas waxaan ku jiray jahwareer. heesaha ayaan bilaabay in aan dib u sameeyo lacag badan ayaa i soo gashay balse wali waxaan waday baadi goobta xaqiiqada. Waxaan xitaa gaaray heer aan go’aansaday in diinta Budhisimka ay tahay mida xaqa ah balse waxaan diidanaa in aan ka tago nolosha raaxada leh ee aan ku jiray.
Waxaan sidoo kale isku dayay waxyaabo badan oo kale, diimo yaryar iyo xitaa waxaan dib ugu laabtay in aan akhriso Baybalka si aan jawaabo u helo balse wax i qanciya kama aanan helin. Xiligaas Islaamka waxba kama aanan ogeyn. Balse waxaa dhacday arin aan isleeyahay waa mucjiso, walaalkay ayaa safar ku tagay magaalada Al-Qudus isagoo aad ula dhacay diinta Islaamka iyo qaasatan sida ay u camiran yihiin masaajida.
Markii uu ka soo laabtay Qudus ayuu ii keenay kitaab Quraan ah. Runtii ma uusan noqon Muslim balse waxa uu dareemay in ay diinta Islaamku xaq tahay. Markii aan bilaabay akhrinta Quraanka ayaan yaqiinsaday in kani uu yahay hanuun la ii soo diray, waxaan jawaabo u helay dhamaan su’aalihii mudada aan ku wareersanaa.
Waxaan fahmay waxa diinta la yiraahdo, diintu in aysan ahayn sida reer galbeedka u qaataan balse ay tahay diintu Islaamka. Qofkii diinta qaata waxaa loo yaqaan xagjir xaga reer galbeedka balse anigu xagjir ma ahayn ee waxaan raadinayay jawaabo i qanciya. Waxaan yaqiinsaday in sababta aan u noolnahay ay tahay in aan ilaahay caabudno. Xiligaas wixii ka dambeeyay waxaan raacay wadadii aan Muslim ku noqon lahaa.
Waxaan fahmay in waxkasta uu abuuray ilaahay oo waxkasta uu maamulo. Waxaa iga jabay kibirkii iyo islawaynidii aan ku soo barbaaray. Waxaan kale oo yaqiin saday ujeedada nolosha. Hada ayaan bilaabay in aan fahmo caqiidada, waxaan dareemay in aanba Muslim ahay. Quraanku waxa kale oo uu i fahan siiyay shaqadii nabiyada iyo sida loo badalay diimaha Kiristaanka iyo Yuhuuda. Waxyaabaha Quraanku uu xooga saarayo waa waxyaabo aan maalinkasta arki jiray balse marnaba aanan dan ka lahayn , tusaaale ahaan qoraxda iyo dayaxa sidaa uma daneyn jiray balse marka Quraanka leeyahay ku cibri qaata ayaan dareemay muhiimadooda iyo sida ay u kala duwanyihiin isla markaana isku si noogu muuqdaan.
Markii aan Quraanka si fiican u sii dhex dabaashay waxyaabo badan ayaa ii baxay sida salaada, sadaqada, naxariista. Muslim wali ma aanan noqon balse waxaan bilaabay in aan jeclaado Muslimiinta inkastoo aanan xiriir wali la sameyn. Waxaan go’aansaday in aan Muslimiinta la kulmo.
Waxaan safar u aaday AlQudus sidii uu walaalkay sameeyay. Ka dibna waxaan galay Masjidka Al-Aqsa oo waan fariistay. Nin ayaa ii yimid markaas ayuu i waydiiyay “Muslim miyaa tahay?” Waxaan ku jawaabay “Haa” ka dibna waxa uu i waydiiyay magacayga , markas ayaan ku jawaabay “Stevens”. Markaas ayuu iga tagay isaga oo jahwareersan. Salaada ayaan la xirtay jameecada aniga oo aan waxba fahmin.
Markii aan dib ugu soo laabtay London, waxaan la kulmay gabar Muslimad ah oo magaceeda ahaa Nafisa. Waxaan u sheegay in aan doonayo in aan noqdo Muslim. Waa sanadkii 1977. Waxay ii tilmaamtay masjidka. Waa 1 iyo bar ka dib markii aan Quraanka helay.
Maalin jimco ah ayaan Masaajidka tagay oo Imaamka ayaan la kulmay. Halkaas ayaan shahaadada ku qiray. Waxaan xaqiiqsaday in aan lacag iyo aduunyo tabcay balse waxa iga maqnaa uu ahaa hanuunka. Waxaan wajahay ilaahay oo aysan noo dhaxayn cidna.
Ugu dambeyntii waxaan jeclahay in aan iraahdo wax kasta oo aan sameeyaa ilaahay dartiis ayaan u sameeyaa. Intii aanan Quraanka akhrin lama kulmin Muslimiinta, balse waxaan xaqiiqsanahay in aysan jirin bulsho wada fiican. Balse Islaamku waa wada fiicanyahay.
Markii uu Muslimay Cat Stevens waxa uu la baxay Yusuf Islam wali waa noolyahay oo hada waxa uu sameeyaa nashiidooyinka Islaamiga ah.
maasha allaah qofkoo illaah hanuun ladooono ayaa hanuunsamo wll qeerka ayaa kashqenesaa illaah hakaa awaal mariyo anagana illaah hanagu toosiyo jidka toosan
mashaalah ilahey baa hanuuniyay lkn musiga uukudhexjiro walimauusan fahmin miyaa inuu ficneen dabcan qof usheego inuu ficneyn mauusan lakulmin dabcan mahadsanidiin qisada aad noosoqorteen
Maashaa Allaah waa qiso cibro qaadasho leh, anaga Muslimiinta ahna Alle ha nagu toosiyo Diinteena Islaamka iyo Saladaba.
zegt:Hee lieve luitjes,Arie goed aamnekogen? Zal wel blij zijn om z\_’n gezinnetje weer te zien en andersom ook natuurlijk Bijzonder om te lezen over de erbarmelijke toestanden van de San/Bush-people en het I am special-gedeelte .Gaaf dat jullie een zonnestraal mochten zijn van Gods Eeuwig Liefdeslicht.Allemaal een big hug en Gods zegen bij het werk in Kaapstad. Gaaf om zo\_’n thuiskom gevoel te hebben.@
Mataan, waxan jeclahay iney nashiidaadu ee xaraan ahayn iyado bila musik ah lakine taa wadata musik yada taas baa la diideey waa bilahi tawfiq… allahu aclam.
ja.. er waren inderdaad nog meer graippge reclames. Blijkt dat het bericht Grappige reclames eigenlijk het tweede deel waren. En wie zijn wij dan om jullie daar ook niet mee te laten
March 3, 2012 at 23:17
Mansha allaah illaahey ayaa karmo siyay inta kaleneh alle hasoo hanuniyo muslinkane kuwi dintooda ku adadkado alle hanaga dhigo insha allaah
Sahra shekh says:
Asc dhaman asxb sln kadib wlhi wa qiso wanag badan masha.allah yusuf islam wado dher ayu uso maray is lamka waxan rajeyna inta lunsan in u illah so hanuniyo allah hanagu hanuniyo wadada saxda ah qurankana kuwi xafido allah naga dhigo asaga aya natuso islamka